Yunvarsiitii Saayinsiifi Tekinooloojii Adaamaa: "Barnoota dhiisnee galuun dhamaatii maatii keenyaas gatii dhabsiise" - BBC News Afaan Oromoo
Yunvarsiitii Saayinsiifi Tekinooloojii Adaamaa: "Barnoota dhiisnee galuun dhamaatii maatii keenyaas gatii dhabsiise"
21 Amajjii 2019
Goodayyaa suuraa Barattoota Yunvarsiitii gadhiisanii bahaa jiran
Barattoonni Yunvarsiitii Saayinsiifi Teeknolojii Adaamaa mooraa gadhiisanii gara maatii isaaniitti galaa jiru.
Yunvarsiitichi barattoonni sababoota garagaraatiin barnooti adda ciccitaa waan tureef qabiyyee seemisteera tokkotti baratamuu qabu keessaa harka 80 akka hin baranne hime.
Qajeelfama barnootaa irratti hundaa'uunis barnoonni seemisteera kanaa akka adda citee barattoonni mooraa gadhiisanii bahan senetiin yuunivarsiitichaa murteessuun isaa ni yaadatama.
Yunvarsiitichi walga'ii seenetiin booda xalayaa akka lakkoofa Itoophiyaatti gaafa Amajji 12, 2011 baaseen murtee kana beeksiseera.
Nageenyi yuunivarsiitotaa barattootaafi maatiif yaaddoodhaa?
Sababa du'a barattoota Yunivarsiitii Adaamaa poolisiin qorataa jira
Murtee yunvarsiitichaa irratti hundaa'uunis barattoonni mooraa yunvarsiitichaa gadhiisuun gara maatii isaaniitti galuu eegalaniiru.
Barattoonni gara maatii isaaniitti galaa jiran BBCtti akka himanitti, yeroon barnootaa semisteerri tokko faayidaa malee qisaasa'ee gara maatiitti deebi'uun akka isaan gaddisiise himan.
Barnootni maaliif ture kan adda cite?
Jalqaba wayita Yuunivarsiitii Saayinsiifi Teekinoolojii Adaamaa gallu bifa addaan qormaata fudhannee, dhibbeentaa 90 carraan barnootaa digirii lammataa akka nuuf kennamu waadaan nuuf galameeti jedha barataan Injinariingii waggaa lammataa Galataa Tonkuu.
Booda garuu sun kan jedhame beeksisaaf malee carraan kennamu hin jiru jedhamne jedha.
Sun barattoota mufachiisee barnoota adda kutanii gaaffii gaafachaa akka turanis barataan kun dabalee hima.
Dabalataan gaaffiin du'a barattoota sadii yeroo darbe mudate irratti gaafatame baruumsi marroo biraaf akka adda citu sababa ta'uu barattoonni ni himu.
Gaaffiin yeroo gara garaa barattoonni gaafatan kallattii sirrii hin taanetti hiikamee murtee kanaan barnoota dhiisnee galuun xinsammuu keenyarratti dhiibbaa fidaa jedhu.
Yeroo barattoonni yunvarsiitiwwan biroo barnootarra jiran kanatti nuti barnoota dhiisnee galuun dhamaatii maatii keenyaas kan gatii dhowwatudha jedhu barattoonni.
Waan eebbifamtoonni dhaabbilee barnoota ol-aanoo gochuu qaba
Barumsi addaan cituuf kan sababa ta'e gaaffii dhimmoota gara garaa irratti ka'ee ture jedha barataa Injiinaringii waggaa shanaffaa kan ta'e Qalbeessaa Haata'uu.
Keessattuu dhimma barattoota yunivarsiitichaa sadan mooraa keessatti du'anii argamanii ilaalchisee gadda keenya ibsanna kan jedhuun barnooti dhaabbate jedha.
"Barnoota addaan kutuun dhiibbaa baayyee qaba kan jedhu barataan kun barataan of danda'ee baratu hin jiru; kan abbaan hojii dafqaan bulaan dafqee barsiisutu jira."
"Kan haati itti daldaltee, qoraan itti cabsitee barsiistufaatu jira", jedha.
"Kanaaf, eenyullee mucaan koo barana naaf eebbifama jedhee eeggata. Amma fakkeenyaaf ani barataa bara kana keessa eebbifamudha. Maatiin na eegaa jiru."
"Ani mataan koo bara kana eebbifamee bara egere yoona kana waanta tokkorran ga'a jedheen baayyee ariifannaa guddaadhaan eegaa jira."
Semisteera ykn waggaa tokko dhiisii alkan tokkoyyu baayyee rakkisaadha kan jedhu barataan kun yeroo amma kana dabaluun bara rakkinaa ofitti dabaluu jechuudha jedha.
Barattoonni digirii jalqabaa sagantaa idileen baratan hunduu Amajji 12-14 mooraa gadhiisanii akka bahaniifi Amajji 15 irraa eegalee tajaajilli barattootaaf kennamu akka addaan citu yuunivarsiitichi akeekkachiiseera.
Gara fuula duraatti ammoo barattoonni warra naamuusaafi seera yunivarsiitii eeganii barachuu barbaadaniif barumsi semisteera tokkoffaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa Bitootessa 25fi 26 akka haaratti galmeessuun akka jalqabamu beeksiseera.
Odeeffannooon hanga ammaa poolisiin du'a barattoota Yunivarsiitii Adaamaa irratti qabu maali?
Waldhabdee Yunvarsiitii Asoosaatti uumameen lubbuun barattoota sadii darbe
Barattoonniifi maatiin yuunvarsiitii naannoo biraatti barachuu ni yaaddofna jedhu
21 Fuulbana 2018